Breakout မဟာဗျူဟာအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး | ပံ့ပိုးမှုစျေးနှုန်း Range - စတော့အိတ်အွန်လိုင်း Investing
ရရှိနိုင်ပါကအခြားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများရှိပါသည်။ လေ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်သည်များအသုံးပြုတဲ့မဟာဗျူဟာများတ breakout မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ breakout ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကဘာလဲ?
ဤတွင်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် breakout နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးဥပမာတစ်ခုကုန်သွယ်မှုင်
ဒီအမြင့်မားသောစျေးနှုန်းအတက်အကျပေါ်အခြေခံပြီးရဲ့ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်နာရီပေါင်းများစွာကျော်တစ်ဦးအချို့သောငွေကြေးတစ်စုံရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်အောက်ပါနေပြောကြပါတယ်။
သင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ မှစ. သင်စျေးနှုန်းမရှိသလောက်အချို့စျေးနှုန်းအမှတ်အထက်မြင့်တက်ကြောင်းသတိပြုမိ။ ဒါဟာအစအခြို့စျေးနှုန်းအမှတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော drop မထားဘူး။
ဤသည်လမ်းကြောင်းသစ်အချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ပမာဏနေဆဲဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းတော်လှန်ရေးအထက်မြင့်တက်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံမှုစျေးနှုန်းအကွာအဝေးကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်မှာအချိန် breakout ဟုခေါ်သည်။ အရှင် breakout မဟာဗျူဟာခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲမှာ breakouts ဖော်ထုတ်နှင့်သူတို့ထံမှအမှုနဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
အဆိုပါဖယောင်းတိုင်ကောင်းစွာခုခံအထက်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ခံမှုအဆင့်အထိကိုအောက်တွင်ပိတ်။ သင်အောင်မြင်မှုများအမှတ်ဖော်ထုတ်င့်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်စျေးနှုန်းမြင့်တက်သို့မဟုတ် drop လိမ့်မယ်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးခန့်မှန်းပါဝငျသညျ။ ဤနည်းကိုသင်အလွယ်တကူအမြတ်အစွန်းအရောင်းအဝင်နှင့်အထွက်နိုင်ပါသည်။
တစ်အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးသရုပ်ပြအကောင့် sign up ပြုလုပ်ပါနှင့်သင့်အကောင့်ထဲမှာ $ 10000 ရ။
1 ။ အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံစျေးနှုန်းအချက်များသုံးပြီး breakout အမှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။ မီးခုံဇယားအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်သည်ထိုစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအချိန်တိုးချဲ့ကာလနှစ်ခုစျေးနှုန်းအချက်များအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိလေ့သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
သောစျေးနှုန်းများမရှိသလောက်အချို့စျေးနှုန်းမှတ်အထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော go ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပိုင်းထောက်ခံမှုအဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အထက်စျေးနှုန်းအမှတ်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှာအမှတ်ဖဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအောင်မြင်မှုများနည်းဗျူဟာကိုသုံးနေစဉ်ကျွန်မသတိထားမိတယ်အရာတစ်ခုမှာ၎င်းချိုးအမှတ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်တခါ, စျေးနှုန်းကတော့လမ်းကြောင်းသစ်နောက်ကြောင်းပြန်မတိုင်မီအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ပမာဏမြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျဆင်းနေဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
မှတ်စု: ကြေကွဲအချက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းခုခံ / ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်အပေါ်တစ်ဦးစိတ်အားထက်သန်မျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်၏တစ်ခုခုမှစျေးနှုန်းလက်မပိုမိုနီးကပ်စွာပြီးတာနဲ့ volume ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်လော့။ အသံအတိုးအကျယ်မြင့်မားသည်ဆိုပါကတစ်ဖဲ့အမှတ်ရှိပါလိမ့်မည်ကြောင်းဖွယ်ရှိပါတယ်။
2 ။ တစ်ဦးမယ့်ကြေကွဲအမှတ်ခန့်မှန်းဖို့ကုန်သွယ်အကွာအဝေးအသုံးပြုခြင်း။ တစ်ခါတလေကျွန်မကြိုးစားကြည့်ပြီးကြေကွဲအမှတ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ဖွယ်အခါကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ကုန်သွယ်အကွာအဝေးကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါကုန်သွယ်အကွာအဝေးရိုးရှင်းစွာခုခံအဆင့်နှင့်ထောက်ခံမှုအဆငျ့အကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အောင်မြင်မှုများဖြစ်ပေါ်မီ, စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်အချို့အကွာအဝေးအတွင်းဆက်လက်တည်ရှိလေ့ရှိပါတယ်။
ကိုယ်။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကွာအဝေးရှည်လျားကြာလျှင်, အောင်မြင်မှုများသိသိသာသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။
ii ။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကွာအဝေးကျဉ်းမြောင်းလျှင်, breakouts ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အမြတ်အစွန်းအချက်ပြမှုများကိုပေးလေ့ရှိပါတယ်။
iii ။ တစ်ဦး breakout ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါကလမ်းကြောင်းသစ်ရုတ်တရက်နောက်ကြောင်းပြန်ရှိမရှိကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရှည်လျားသို့မဟုတ်ပိုင်းတွင်သွားကြဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။
ဃ။ အဆိုပါ breakout ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ, တစ်နေရာရာမှာ breakout ဖယောင်းတိုင်အောက်တွင်သင့်ရပ်တန့်အရှုံးထားပါ။ ဒါက breakout မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုရုတ်တရက် reverse ခဲ့ကိစ္စတွင်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်။
ငါသည်ဤဥပမာများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ / EUR ငွေကြေးကို pair တစုံကိုသုံးပါသွားတယ်။ ငါငွေကြေးအားလုံးသုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာသူတို့ရဲ့မတည်ငြိမ်သောသဘောသဘာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မကြာခဏဖြစ်ပေါ် breakouts များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတော်လေးမြင့်မားသည်။
1 ။ ငါလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာမှဇယားကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပါသည် ဂျပန်ခုံ.
2 ။ ငါလုပ်ပေးလိမ့်မယ်နောက်တစ်နေ့အမှုကိုခုခံနှင့်ထောက်ခံမှုအဆင့်ဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ တစ်ဦး breakout အမှတ်ဖြစ်ပေါ်သည်အထိတတိယ, ငါသည်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, စျေးနှုန်းတော်လှန်ရေးမျက်နှာပြင်အထက် rallies ။ ငါ 30 စက္ကန့်တစ်ခုဝယ်နှင့်အချိန်ကိုငါ့ကုန်သွယ်မှုပါစေ။
4 ။ အဆိုပါ 30 စက္ကန့်ရဲ့အဆုံးမှာစျေးနှုန်းနေဆဲငါသည်ငါ့အမြတ်အစွန်းလုပ်နိုင်အောင်မြင့်တက်နေသည်။ ယနေ့အနေနဲ့အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးသရုပ်ပြအကောင့် sign up ပြုလုပ်ပါနှင့်အတူကုန်သွယ်မှု $ 10000 ရ!
1 ။ သင့်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ကဒီမဟာဗျူဟာကို အသုံးပြု. အခါကြေကွဲအမှတ်ဖော်ထုတ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါကုန်သွယ်အကွာအဝေးအထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါစျေးနှုန်းရွေ့လျားဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုတံခါးအထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာကြေကွဲအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေး entry ကိုအပြင်ကသင်သည်လည်းစျေးနှုန်းကြေကွဲအမှတ်အထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတည်နေကြလိမ့်မည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်ပိုကြီးအမြတ်အစွန်းစေနှင့်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
2 ။ အောင်မြင်မှုများကုန်သွယ်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲဘယ်မှာတက်ကြွစျေးကွက်များတွင်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါများသောအားဖြင့် FX ငွေကြေးအားလုံးနှင့် cryptocurrencies ထိုသို့အကြံပြုပါသည်။
Tags: ကြေကွဲအမှတ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုအများဆုံးဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုပိုက်ဆံဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, မဟာဗျူဟာအနိုင်ရအိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေး, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာနည်းလမ်း, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုရုပ်သိမ်းရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာများ, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်မှုဆုတ်ခွာခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်, အိုလံပစ်ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ